Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguEugene
Yindlu yangasese, ichibi kunye ne-jakuzzy zikhethelwe iindwendwe ngokupheleleyo, jonga ngo-3pm kwaye ujonge u-12pm.
Ine-rustic jaccuzy kunye neeterras ezininzi, apho unokuqwalasela imbonakalo yendalo. Inegumbi eliphindwe kabini kunye nelinye igumbi kwinqanaba lesibini, elinothando kakhulu kwizibini ezitshatileyo, linombhede wangaphandle, i-barbecue, i-hammock, i-swing, izihlalo eziqengqelekayo, izibane kwi-terraces nakumagumbi, phakathi kwabanye ukuze ujabulele.
Indawo yethu iphefumlelwe yi-rustic kunye nangaphandle kwendabuko, sifuna ukuba babe namava ahlukeneyo, njengemvakalelo yokuziva kwindlu yomthi okanye inkampu, ekubeni ine-chalet. Ipropathi ineendawo ezininzi zokubukela ukutshona kwelanga kunye nokudibanisa nendalo
I-Imperial rustic yi-rustic mini penthoses, enamagumbi ama-2 ukuze izibini zibe namava ahlukeneyo ngokukhululekileyo, kunye nedama lokudada kunye ne-Jacuzzi, zombini kunye nemibono yendalo kunye ne-terrace yangaphambili.
Igumbi lokuqala linebhedi ephindwe kabini kwaye linokufikelela ngokuthe ngqo kwiJacuzzi.
Ukuze ungasusi i-rustic essence, igumbi lesibini liyi-chalet eneebhedi ezidibeneyo, zombini amagumbi anamakhethini xa ilanga liphazamisa.
Sinikezela ngamashiti, imiqamelo, iitawuli, njl.
Sibekwe phakathi kwamaphandle kunye nedolophu yaseMayaguez, kwindawo ezolileyo kunye neyokuphumla, ilungele ukudibanisa nendalo.
Igqwesile kwizibini ezitshatileyo, inedama lokuqubha kunye nejacuzzi.
Ine-grill ene-cylinder yegesi kwi-terrace, ekhitshini kukho isinyithi kunye nesitofu sombane esinezitshisi ezi-2, iipleyiti, iipuni, iifolokhwe kunye nezixhobo ze-grill.
Nayiphi na imibuzo onokuthi uqhagamshelane nayo umamkeli 24/7 kwaye uya kukuvuyela ukukunceda.
Inebhedi yangaphandle, ifenitshala yangaphandle, izitulo ezininzi ezishukumayo, iitafile ezi-2 zesizinda, phakathi kwezinye ukuze uyonwabele.
Umbuki zindwendwe ngu- Eugene